Hay Baler, Baler Machine, bokushicilela ryan, Wood Chippers, bokushicilela Disc Mower - Hualand
Siye Uphethe Advanced-technology
The Best olusebenzayo-nkonzo
Hay imishini Finger
Hay ryan iharikwe
Rotary Umcinga GQM125-220
Wood NOKUCUKUCEZA Machine WC-8
Rotary Umcinga GQY125-220
Rotary Umcinga GQN125-220
"WEIFANG HUALAND OOMATSHINI CO., LTD" baqala yorhwebo yamazwe ngamazwe ngo-2004 iimveliso kumgca Okokuqala kwaba ngaphambili umlayishi isiphelo kunye backhoe ugandaganda. yasungulwa ngo-2006 Huamachinery asakhasayo iinkuni PTO chipper nedizili iinkuni chipper.Both zithengiswa kakuhle ukuya world.other attachments itrektara zaye, ezifana, esiphelweni mowari, Slasher, sweeper indlela, snowblower.In 2010 Huamachinery OEM koomatshini zokwakha indlela brazil.And ngoku Huamachinery uye iindibano processing 5, 3 zocweyo ibandla, ucweyo 1 umphezulu unyango, 2 yokugcina imveliso ugqibile, 2 izahlulo warehouse, 1showroom; Iimveliso imigca 3: koomatshini haying ngokhuni koomatshini attachments 3PT ugandaganda-ngaphambili umlayishi ekupheleni, backhoe, ikhephu blower, sweeper zendlela njl 100 abasebenzi kunye 6 iinjineli ...
Hay baler ne mgawuli 0910C
Rotary Umcinga GQE120-200
Wood NOKUCUKUCEZA Tractor Ukuphumeza WC-18/22
Le Model 2500 ingasetyenziswa kwiitrektara ngenxa 18-50hp 1 Kuqala ncamathela indibano eziphambili koqiniso ngongoma zintathu. Xa ufaka uvote tivekiki, qiniseka ukuba iibheringi ngaphakathi naLindiili kwicala emazantsi uvote hub.The tivekiki oxhulumene kusetyenziswa iibholiti ezine. 2 Qinisekisa ukuba t ...
Kukho ezinye izinto ukwenza phambi kokuba isebenze le baler mini ngeenxa zonke. 1 Qhoboshela baler ukuya koqiniso ngongoma zintathu. Oku kuzakuvumela ukuba yonyuse ukuhambisa baler ngelixa esenza ibandla. 2 Kuya kufuneka ukufumana iindawo egcinwe ngaphakathi gumbi baler. Ukubuyisa iindawo, Remo ...
Lwedilesi: isixeko Weifang, Shandong kwiphondo, China